Thailand MICE: Tourism Students Shine at Contest | Breaking Travel News
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Indostrian'ny fihaonana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Thailand MICE: Mamiratra amin'ny fifaninanana ireo mpianatra fizahantany
Dr. Scott mampiseho ny ara-dalàna vaovao ho an'ny Thailand MICE
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Thailand MICE: Mamiratra amin'ny fifaninanana ireo mpianatra fizahantany
Mpianatra avy amin'ny MSME Business School an'ny Assuming University dia niverina tamim-pandresena tamin'ny Fisedrana ho an'ny tanora ao amin'ny Thailand MICE 2020 fifaninanana notontosaina tamin'ny 9 Jolay 2020 tao amin'ny Hyatt Regency, Bangkok. Ny ekipa Assuming University dia namorona ny Illuminate Music Festival, hetsika hybrid MICE (atrikasa + fampirantiana) ary (fampisehoana + mivantana mivantana), hifaninana amin'ny hevitra manavao ny ekipa hafa ho an'ny hetsika MICE. Ny ekipa tsirairay dia mila manomana drafitra fandraharahana amin'ny antsipiriany sy fampisehoana varotra dimy minitra. Ny ekipan'ny Departemantan'ny fandraisam-bahiny sy ny fizahantany HTM dia nomena anarana hoe Illuminate: Nattapat Ruckworakijkul (Copter), Sirapob Jirngsaard (Mix), Atibordee Noichan (Tib), ary Donlaya Kluaphid (Benz).
Ekipa 15 no nifaninana tamin'ny Thailand MICE Tanora fanamby 2020 misolo tena anjerimanontolo sivy any Thailand. Ny fihodinana voalohany dia nisy fampisehoana an-tserasera an'ny mpianatra. Ireo ekipa nahafeno fepetra dia nandray anjara tamin'ny Q& A tamin'ny Internet niaraka tamin'ireo mpitsara. Ary farany, ekipa enina no nasaina hanolotra ny heviny MICE amin'ny mpitsara mandritra ny hetsika mivantana ao amin'ny Hyatt Regency. Ireo ekipa mpandresy dia hihaona indray amin'ny fararanon'ny taona 2020 hifaninana amin'ny AFECA (The Asian Federation of Exhibition & Convention Associations) Asia MICE Youth Challenge. Ny mpitarika ny ekipa, Nattapat Ruckworakijkul (Copter) dia naneho ny fihetseham-pon'ny ekipa tamin'ny filazany fa "Tena ankasitrahanay ny fotoana ahafahana mifaninana amin'ny vondrona anjerimanontolo toa izao. Feno fankasitrahana izahay mpikarakara sy Ajarn malalantsika, Dr. Scott, noho io traikefa io ary nanosika anay moramora hanao izay fara herinay mandritra ny dingana rehetra. ” Na dia mirehareha amin'ny zava-bitan'izy ireo aza ny mpianatra dia fantany fa tsy maintsy miomana hifaninana amin'ny ekipa avy amin'ny Mahidol University International College sy Kasetsart University, ekipa mpandresy hafa izy ireo, tamin'ny fanambaran'ny AFECA Youth tamin'ny volana septambra 2020.
Ekipa HTM AU
Dr. Scott no voalohany namorona ny Mazava ho azy MICE ho an'ny MSME Business School tamin'ny 2006 ary efa nampiofana ekipa MSME Business School am-polony amin'ny fifaninanam-pirenena sy iraisam-pirenena. "Soa ihany aho fa nahazo fidirana tamin'ny alàlan'ny maha-mpikambana ahy tao amin'ny SKAL International sy ny fianarako nahazo diplaoma tao amin'ny Assump University hianarana avy amin'ireo mpitarika ao amin'ny indostrian'ny MICE." Manampy hoe, "Faly aho mahita ny fandalinana MICE lasa malaza kokoa any Thailandy rehefa manomboka mahatakatra ny tontolon'ny MICE mahatalanjona sy ny fitantanana hetsika ny mpianatra sy mpampianatra." Ny MSME Business School dia nanao sonia fifanarahana fahatakarana (MOU) miaraka amin'ny TCEB hanohizana ny fampandrosoana ireo matihanina amin'ny fitantanana hetsika.
TCEB Tanora fanamby amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina
Ny fampiroboroboana ny MICE Capities Convention and Exhibition Bureau (TCEB) MICE dia niara-niasa tamin'ny Thailand Association Insentif sy Convention Association (TICA) sy ny Mahidol University International College (MUIC) hikarakara ity fanangonana ny oniversite ambony manolotra ny MICE ity sy ny fitantanana hetsika. Tanjon'ny sampana fampandrosoana ny MICE Capencies an'ny TCEB ny hamorona matihanina voaofana tsara izay mahay manefa fenitra iraisam-pirenena momba ny serivisy nefa manasongadina ny hafanana sy ny hatsaram-panahy Thailandey nentanim-panahy, manentana ny andiana mpianatra vaovao hikatsaka asa mahafa-po eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny MICE any Thailandy. Ny Fikambanana famporisihana sy fivoriambe ao Thailand (TICA) dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra naorina tamin'ny taona 1984 mba hanampiana ny fitomboan'ny Thailand ho toerana itodiana kokoa amin'ny fivoriana, famporisihana, fivoriambe ary fampirantiana (MICE). Ny maha-mpikambana an'i TICA dia mpilalao lehibe indrindra amin'ny indostria MICE.